Yedu Nyaya - Shanghai Copak Viwanda Co., Ltd.
Shanghai COPAK Viwanda Co, LTD, yakavambwa muna2015, ine hofisi yekutengesa muShanghai uye fekitori yakabatana muZhejiang. COPAK inyanzvi yekutengesa Eco-inoshamwaridzika chikafu & chinwiwa kurongedza zvigadzirwa: PET makapu, PET mabhodhoro, Mapepa mbiya, nezvimwe.
COPAK inoedza kuchengetedza zvigadzirwa zvitsva zvinogara pane zvinoitika uye zvinopa vatengi zvinodhura uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Copak inopa PET kapu uye PET bhodhoro remavhoriyamu ese, kubva 1oz kusvika 32oz, ese ari maviri akajeka uye etsika akadhindwa. Semunhu mudiwa murefu uye wehunyanzvi mutengesi kune vatengi vedu, isu takazvipira kugadzira nekugadzira zvakavimbika, zvinokwanisa uye zvine mutsindo makapu ePET nemabhodhoro.
Mutsara weCOPAK usina guruva wezvigadzirwa unogadzira akawanda akasiyana marondedzero ezvekugadzwa chikafu uye zvinwiwa zvitoro (maresitorendi, maketani ezvikafu zvinokurumidza, zvitoro zvekofi, matare ezvokudya, supamaketi uye nezvimwewo) pamwe nevatengi vemusika. Iyi makapu uye mabhodhoro anoshandiswa zvakanyanya kuCold zvinwiwa, Beverage, ice kofi, smoothies, bubble / buba tii, milkshakes, jongwe jongwe, mvura, masoda, majusi. Sauces uye echando-mafuta.
Isu takapa PET makapu uye mabhodhoro kune akawanda anozivikanwa brand. Iye zvino zvigadzirwa zvedu zvinoonekwa pasi rese. NeCOPAK, vatengi vane chokwadi chekuva nesarudzo yakavimbika uye yakavimbika, uye inopa imwe yenguva dzinokurumidza kutendeuka kwemaindasitiri zvigadzirwa zvinoraswa.
Guruva Mahara musangano
Chikafu giredhi chiyero
Copak inogara iine chinangwa chekuvaka kwenguva refu bhizinesi nemutengi. Hunhu ndiwo mudzi, mutengi ndiyo tenet. Copak inogara ichitora mhando uye sevhisi sehupenyu, inopa chigadzirwa chemhando yepamusoro uye sevhisi yekutarisisa nomoyo wese.Tine yedu nyanzvi QC timu uye takapfuura FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 zvitupa.
Emutengesi ane nharaunda.
Copak anogara aine hanya nezve nharaunda uye anoteedzera nemazvo basa rekuchengetedza zvakatipoteredza. Mazuva ano, zvigadzirwa zvakasvibirira zviri kutora kutariswa nevanhu. Copak inosvika pakushandisa zvakanyanya uye zvine hushamwari zvinhu zvakatipoteredza, senge RPET nePLA nePepa.Tinovavarira kuwiriranisa budiriro pakati pemunhu nezvakasikwa.
Sane hunyanzvi mutengesi:
Copak zvakare iri basa rekudzikisira kumanikidzwa kwemabasa, kukurudzira kugona kwevashandi, zvichitungamira kuKuzviongorora-wega, uye kupa mipiro kunzanga. Isu tinovavarira kuona iyo inoenderana kubatana kwebhizinesi, vashandi, uye nzanga.